बिहान खाली पेट सख्खर खानुका लाभ यस्ता छन् ! जानी राखौ « Onlinetvnepal.com
बिहान खाली पेट सख्खर खानुका लाभ यस्ता छन् ! जानी राखौ
Published : 24 January, 2019 4:15 pm
सख्खर उखुबाट तयार गरिएको शुद्ध, अपरिष्कृत गुलियो हो । उखुको रसमा विभिन्न खनिज र भिटामिन हुन्छ । सख्खरलाई चिनीको निकै शुद्ध रुप मानिन्छ । सख्खर लौहतत्त्व (आइरन) को एक प्रमुख स्रोत हो र रक्तअल्पत्ता (एनिमिया) का रोगीलाई चिनीको साटो सख्खरको प्रयोग गर्न सल्लाह दिइन्छ ।
अधिकांश व्यक्तिहरुलाई चिसो मौसममा सख्खरको सेवन गर्न जानकार व्यक्तिहरुले सुझाव दिने गर्छन् । यसको प्रकृति तातो हुन्छ त्यसकारण यसले शरिरलाई तातो बनाउन मद्दत गर्छ । आयुर्वेद संहिता अनुसार यो छिटो पच्ने, रगत तथा भोक बढाउने किसिमको हुन्छ । यसबाहेक सख्खरबाट बनेका खानेकुर खाँदा विभिन्न रोगबाट राहत मिल्छ ।जो महिला वा युवतीलाई महिनावारीका बेला पेट दुख्छ उनीहरुका लागि सख्खरको सेवन निकै फाइदाजनक हुन्छ । सख्खरले पाचनतन्त्रलाई सही राख्छ । त्यसकारण महिनावारीका बेला सख्खरको सेवन गर्नुहोस् । यसले तपाईंको पेट दुखाई कम गर्छ ।
यदि तपाईंको जोर्नी दुख्छ भने सख्खर तपाईंका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । सख्खरमा भएको क्याल्सियम र फस्फरोसले हड्डी बलियो बनाउन सहयोग गर्छ । यसबाहेक नियमित रुपमा सख्खरको एउटा टुक्रा अदुवासँग खाने हो भने चिसो मौसममा जोर्नी दुखाई कम हुन्छ ।सख्खर तपाईंको छालाको लागि पनि निकै राम्रो हुन्छ । यसले तपाईंको छालालाई स्वस्थ र आकर्षक बनाउन सहयोग गर्छ । यसले रगतबाट खराब विकार (टक्सिन) लाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ जसका कारण तपाईंको छाला चम्किलो हुनथाल्छ ।
सख्खरको प्रकृति तातो हुने भएकाले यसको सेवनले रुघा–खोकी, कफमा आराम मिल्छ । तर याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने रुघाखोकीमा काँचो सख्खर खानु हुँदैन । यसलाई तपाईं चिया/तातोपानीमा घोलेर वा यसको लड्डु बनाएर खान सक्नुहुन्छ । यसका साथै, गला खस्खसाएर आवाज बसेको छ भने ५० ग्राम सख्खरमा दुईवटा कालो मरिच मिसाएर खाँदा यो समस्यामा निक्कै राहत मिल्छ ।दमको समस्या भएका व्यक्तिलाई पनि सख्खर खाने सल्लाह दिइन्छ । सख्खरले शरिरको तापक्रमलाई नियन्त्रित गर्नुका साथै यसमा एन्टी एलर्जिक गुण हुने भएकाले दम रोगीलाई निकै राहत प्रदान गर्छ ।
डण्डीफोर हटाउने आयुर्वेदिक तरीका, घरभित्रकै औषधि छ काफी !
डण्डीफोरले यूवाअबस्थामा धेरैलाई सताउने गर्छ । अधिकाँस यूवायूवतीहरुको अनुहारमा एक समयमा डण्डीफोर आउने गर्छ ।